ZIVA MITAMBO YESE YAUNOITA SKIING - ULLER
ZIVA MITAMBO YESE YAUNOITA KUSVIRA
Senge kana iwe uchidzidzira chero imwe mhando yemutambo, isu tinogona kufungidzira ese mabhenefiti ane skiing, asi kusvika papi? Skiing mutambo uyo, kwete chete unogona kupisa kutenderedza 700 kcal paawa, asi zvakare unovandudza immune system yako, tisingarevi, chokwadika, kuti ingani inogona kudzoreredza tsandanyama dzako uye kunakidzwa kwaunoita.
Kuve mutambo weaerobic unosanganisira muviri wako wese, semhedzisiro inofarirwa, kwete chete kupisa macalorie, asi zvakare kuderedza cholesterol uye kuvandudza hutano hwemapapu ako, ndiko kuti, kufema kwedu. Izvi zvinodaro nekuti iwe uchisvetuka, muviri wako unomhanyisa kuita kwema metabolic maitiro, ayo anowedzera kupihwa kwezvinovaka muviri uye oxygen izvo zvavanotakura kumaseru.
Uye ndezvekuti ndiani asingadi kutarisa akasimba zvishoma? Tevere, tichakuudza kuti ndeapi mamhasuru anobatanidzwa, maitiro ekuwedzera huwandu hwavo uye, nekudaro, kuvandudza hunyanzvi hwedu mudare.
Ngatisakanganwe kuti tiri kuzvitsigira pachedu mukufamba pamabhodhi, izvo zvinoreva kuenzanisa kwakanaka.
"Dambudziko" chete iro mutambo uyu wakakwana unotipa huwandu hwekuomarara hwatichava nahwo zuva rinotevera kana tikasadzidzira nesimba, saka zvakakosha kuti titange tadziya. Vanamazvikokota vanokurudzira kuti, kudzivisa kutambura uku kurwadza kwetsandanyama, sumo inofambira mberi ngaiitwe; kwete kubva pakusafamba kubva pasofa kuenda kunotora maawa matanhatu eskiing. Mukuwedzera, zvakakosha zvikuru kudziya zvisati zvaitika, sezvinongoita paunoenda kumitambo yekurovedza muviri, sezvo nenzira iyi tinogona kudzivirira chero rudzi rwekukuvara.
DZIYA-UP RATIDZE KUITA SKI
Unoda muitiro wekudziya-up here? Heano mamwe maekisesaizi:
Para muviri wezasi:
Squats: pakona yakarurama uye kusimbisa dumbu uye pasina mabvi akabuda kubva pakakwirira kwetsoka.
Svetukira kudhirowa: Bhenji yakakoshawo isu, chinhu chikuru ndechekuti iri pakukwirira kwemabvi. Muchiitwa ichi tinogona kusvetuka netsoka mbiri, kutanga neimwe uyezve neimwe, kana kungosimudza nekudzikisa gumbo rimwe chete; chinhu chakakosha ndeye flex.
Kufamba: kumashure chaiko, tarisa kumberi mberi wosimuka wodonha wakafanana pasi.
Mapatya: kumusoro pachitsiko tinomira netsoka netsoka imwe ichirembera.
Para core and the back:
Front plate: chiso chakatsigirwa pamakumbo nemakumbo nemusana wakananga (mukuwedzera, neizvi isu tinoshandisawo zvitsitsinho).
Sit-ups inosanganisira kufamba: pano tinokusiya iwe sarudzo yakasununguka, asi netipi yekuti iyo inononoka kufamba, isu tichave tichiita zvakanyanya maekisesaizi.
Super murume: kuzvambarara nechiso takatambanudzwa zvakakwana tinosimudza makumbo nemaoko panguva imwe chete.
Kusaenda kubva ku0 kuenda ku100 kwakakosha kwazvo kudzivirira chero kukuvara kunogona kuitika, nekusvika ku60% kukuvara kwemabvi. Izvi zvinogona kukonzerwa nekukuvadza kune tendons kana nekudonha uye mavanga, chando dzimwe nguva chingave chisina kupfava sezvatinofunga pakutanga uye kurova kwakaipa kunotisiya isu tisina kunakidzwa nechikamu chakanaka chemwaka. Imwe yekukuvara kwakanyanya kubva pakudonha ndeye anterior shoulder dislocation uye yakaderera kumashure kurwadziwa nekuda kwechimiro chemuviri kuchengetedza chiyero chinoburitsa kushushikana kwakanyanya kumusana wedu.
NDEZVIPI MASUSCLES ANOSHANDISWA MUSKI PRACTICE?
Sezvawaona, nhengo dzemuviri dzinobatanidzwa dzakawanda, uye patakuudza kuti skiing ndeimwe yemitambo yakakwana, takanga tisinganyepi. Iyo yakakosha ndeimwe yeanonyanya kubatanidzwa mhasuru mapoka, kunyanya maviri acho: iyo mimba and the lumbar. Ose ari maviri anotibatsira kudzikamisa isu pachedu, kudzivirira musana uye kutora mamwe kukurumidza sezvatinotsamira ichi chikamu chemuviri. Basa iri rinobatanidzwawo ne magaro, quadriceps e hamstring, iyo, kana takambodzidzira, icharatidza mhedzisiro yakanaka. Uye isu tinomira pachii? Nezve yedu pie y mapatya, iyo inotsigira huremu hwedu hwese uye inoita zvakawanda zvekufamba pa skis. Kuvaita vakanyatsodzidziswa kuchaita kuti tinyanye kukurumidza uye kuderedza radius yedu yekutendeuka mukuita. Uye, tichitaura nezvekuchinjana, isu hatigone kufuratira vakuru vari pamusoro pavo: ivo mabvi. Unogona here kufungidzira kuseredzera pasi usingaashandise? Ndizvo chaizvo, nesuwo hatidaro.
Zvakanaka, isu tatova nechimiro chakakodzera uye avo vari kutungamira kugadzira mafambiro, asi zvakadini nemuviri wepamusoro? The mafudzi and the maoko Ndiwo anoshandiswawo pakuita mutambo uyu, anotakura matanda anotisimudzira nawo uye anodiwa pakuita majana.
Uye pakupedzisira, hatigone kukanganwa nezve shure, yakaputirwa muhuwandu hwezvinzvimbo uye kufamba, kubatanidza mapepa, musimboti nemakumbo, mukutarisira kuchengetedza chimiro, kuenzanisa, kuzvidzivirira, nezvimwe. Muchokwadi, iyi ndeimwe yevakakuvara zvakanyanya nekukakavadzana kwainochengeta, saka zviri nyore kuitambanudza zvese zvisati zvaitika uye mushure mekusvetuka, pamwe nemutsipa. Nokuda kweizvi tinogona kuita basa kubva pamabvi kusvika pachipfuva: kuvata pamusana wedu tinounganidza makumbo akakotama, achitiita bhora.
SKI: AN ADRENALINE SPORT
Kuwedzera kune zvese izvi mabhenefiti pamhasuru nhanho, skiing mutambo unosunungura zvakanyanya sezvo uchitiita kuti tibvise ese adrenaline yatakaunganidza, tichifarira kuzorora uye kusunungurwa kwekushushikana, iyo inobatana nekuzorora kwakanaka kwekudzorera kunogadzirira. isu kune rimwe zuva reku skiing. Uye ndezvekuti kuzorora kwakakosha, sezvo chimwe chikamu pane isiri-muscular level inodzidziswa ndeye reflexes. Chii chakakwana kwete? Eya hongu, kunze kwemuviri isu tinobatanidzawo kudzidziswa kwepfungwa, sezvo tisingagoni kuziva pachine nguva mberi apo tichasangana nemhinganidzo muchando. Nechikonzero ichi, zvakatinakira isu kudzidzisa kugona kwedu kuvandudza uye nekugona kunosanganisira izvi.
KUDZIDZWA KUSNOWLESS KUNANDUTSA MAITIRO ESKI
Iye zvino ndipo paunofunga kuti "zvakanaka, ndinoziva zvose izvi, asi ndingadzidzira sei kuvandudza maitiro angu eku skiing?" Semi, tinoziva kuti uyu, semutambo upi noupi, mujaho wedaro refu. Izvo hazvina kukodzera kudzidzisa mwedzi uye kuzorora imwe 11 yegore. Heino vhidhiyo yakaburitswa neOlympic Federation nezve maitiro ekudzidzira kusvetuka kumba kubva kuna Taylor Fletcher:
Nekuti hongu, shasha huru dzinodzidzirawo kana pasina chando, uye muvhidhiyo iyi tinokuratidza maitiro (kunyangwe kune ino iwe uchada zvakawanda kupfuura chigaro):
MAKARII ANGAPI AKAPISWA KUSIYA?
Uyu mubvunzo wakaoma, sezvo zvinoenderana nehuremu hwemunhu, musculature yavo, murume kana mukadzi uye nekukurumidza kwekufamba. Kuti uwane pfungwa huru, murume ane 70kg achapisa anenge 600-700 kcal paawa.
CHII CHIRATIDZO CHEKUITA KUTI SKI?
Nekugadzirira kwemuviri kweskiing, marudzi ese ekurovedza muviri anosanganisira matako, makumbo uye musimboti akakosha, pamwe nekudzidzisa mazuva maviri kusvika matatu pasvondo. Mimwe mienzaniso yeiyi mapapu, squats, deadlifts, rubber band maekisesaizi, marudzi ese emapuranga, nezvimwe.
CHII MUSCULATURE INOSHANDA PASI?
Skiing inobatanidza mhasuru dzakawanda mukufamba kwayo: musimboti, musana, muviri wese wepasi, nemapendekete.
Zvimwe zve: Hutano nekudzidziswa